ဂျိုးဇက် ပရီးစ်လီ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဂျိုးဇက် ပရီးဆလီ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဂျိုးဇက် ပရီးစ်တ်လီ FRS (အင်္ဂလိပ်: Joseph Priestley, /ˈpriːstli/;; ၁၇၃၃ မတ် ၂၄ – ၁၈၀၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၆) သည် အင်္ဂလိပ် ဓာတုဗေဒပညာရှင်၊ သဘာဝဒဿနပညာရှင်၊ ခွဲထွက်ရေးဝါဒီ၊ ဘာသာရေးပညာရှင်၊ သဒ္ဒါဆရာ၊ ကျောင်းဆရာ၊ လစ်ဘရယ် နိုင်ငံရေးသီအိုရီဆရာဖြစ်၍ လက်ရာပေါင်း (၁၅၀၀) ကျော် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၇၄၄ တွင် မာကျူရီအောက်ဆိုဒ်ကို သီးခြားခွဲခြားပြီးနောက် အပူပေးပြိုကွဲစေခြင်းဖြင့် အောက်ဆီဂျင်ကို တသီးတခြား ရှာဖွေတွေ့ရှိသူဟု ထင်မှတ်ခံရသူဖြစ်သည်။ သို့သော် ဆွီဒင် ဓာတုဗေဒပညာရှင် ကားလ် ဗီဟိမ်း ရှေးလာသည်လည်း ထိုတွေ့ရှိကြောင်းကို ခိုင်ခိုင်မာမာဆိုခဲ့သော်လည်း ပရီးစ်တ်လီက စော၍ ၎င်း၏တွေ့ရှိချက်များကို ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ရှေးလာက ၁၇၇၂ ၌ ပိုတက်စီယမ် နိုက်ထရိတ်၊ မာကျူရီအောက်ဆိုဒ်၊ အခြားများစွာတို့ကို အပူပေးခြင်းဖြင့် တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
အဲလန် ရှာပဲလ်ဇ်၏ ပရီးစ်တ်လီ လက်ရာပုံ(1794)
၆ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁၈၀၄(1804-02-06) (အသက် ၇၀)
အောက်ဆီဂျင် (O2) နှင့် အခြား ဓာတ်ငွေ့ ကိုးခု ( ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် (CO), နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုက် (NO),နိုက်ထရပ်အောက်ဆိုက် (N2O), အမိုးနီးယား (NH3), ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုက်(SO2),နိုက်ထရိုဂျင် ပါအောက်ဆိုက် (N2O4))
၎င်းဘဝတစ်လျှောက် ပရီးစ်တ်လီ၏ သိသာထင်ရှားသော သိပ္ပံဆိုင်ရာ ဂုဏ်ဒြပ်များသည် ၎င်း၏ ကာဗွန်နိတ်ရေ ဖန်တီးခြင်း၊ လျှပ်စစ်အကြောင်း ရေးသားချက်များ၊ ဓာတ်ငွေ့အချို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများအပေါ်တွင် တည်မှီခဲ့ကာ နာမည်အကျော်ဆုံးသည် ထိုဓာတ်ငွေ့များတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်ပြီး အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကို "dephlogisticated air" (လောင်ကျွမ်းမီးလျှံလေ) ဟု အမည်ပေးသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ပရီးစ်တ်လီ၏ phlogiston theory ကို ခုခံကာကွယ်ရန် ခိုင်မာစွာဆုံးဖြတ်ခဲ့မှု၊ ဓာတုဗေဒ တော်လှန်ရေးဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကိစ္စကို ငြင်းပယမှုများက ၎င်းအား သိပ္ပံဆိုင်ရာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကင်းကွာသွားစေခဲ့သည်။
↑ List of Fellows of the Royal Society 1660 – 2007, K – Z။ The Royal Society။
↑ Copley archive winners 1799–1731။ The Royal Society။
↑ H. I. Schlesinger (1950)။ General Chemistry (4th ed.)။ p. 134။ CS1 maint: multiple names: authors list (link)
↑ Kuhn, 53–60; Schofield (2004), 112–113. The difficulty in precisely defining the time and place of the "discovery" of oxygen, within the context of the developing chemical revolution, is one of Thomas Kuhn's central illustrations of the gradual nature of paradigm shifts in The Structure of Scientific Revolutions.
↑ Joseph Priestley, Discoverer of Oxygen National Historic Chemical Landmark (in en)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျိုးဇက်_ပရီးစ်လီ&oldid=685410" မှ ရယူရန်
၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။